Home Sekoly Alahady
SEKOLY ALAHADY VELOMIN'NY TENIN'ANDRIAMANITRA, FANANTENAN'NY FIANGONANA
"Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha, ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy" (Efesiana.6,17)
Ny Sampana Sekoly Alahady dia Sampana velona eto amin’ny FJKM Montrouge Paris, eo anivon’ny Synodamparitany Vato Fehizoro Ampitandranomasina (SP37).
Ny tanjona voalohany kendren'ny mpanabe dia ireto manaraka ireto:
- Fahaizana ny Soratra Masina sy ny tantara ao amin'ny Baiboly,
- Fivelomana amin’ny Tenin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny fitsipika fototra hoe "Ny Sekoly Alahady dia mampianatra ny olona rehetra handray ny Teny Soa Mahafaly ho fiainany, ka hivelarany amin’ny maha zanak'Andriamanitra azy tokoa”.
Nofidianay manokana ho teny fanevan’ny Sampana ny andalan-tSoratra Masina ao amin’ny bokin’i Jakoba 1:22 manao hoe:
« FA AOKA HO MPAKATO NY TENY HIANAREO, FA AZA MPIHAINO FOTSINY IHANY KA MAMITAKA NY TENANAREO »
Omen-danja manokana amin’izany ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora ary manaraka ny fandaharana novolavolain' ny Sekoly Alahady foibe ny fampianarana amin'ny ankapobeny.
Mizara ho sokajy roa ireo ankizy, sokajy kely : 2 - 5 taona, sokajy salantsalany: 6 taona no miakatra.
Isaky ny alahady mialohan'ny fanompoam-pivavahana ny fotoana hianarana (manomboka amin'ny 3 ora tolakandro).
Ankoatra ny fampianarana Soratra Masina dia misy ihany koa ny famolavolana ireo taniketsa amin'ny fianarana mihira sy ny fanaovana asatanana.
Tsy misaraka amin’ireo asa ireo koa anefa ny fitarihana ny mpino ho tia ny asa masina, amin’ny alalan’ny ny fotoanan'ny dimy minitra natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isak’alahady.
Entanina àry isika ray aman-dreny sy mpiantoka hampiditra sy hitarika ny zanatsika amin’ny Sekoly Alahady, satria mari-pitiavana tena lehibe izany sady andraikitra masina nankinina tamintsika rahateo tamin’ny nanaovam-batisa azy ireo.
Izahay tompon'andraikitra ao anatin'ny sampana dia faly mandray anareo ao amin'ny Fiangonana Fjkm Montrouge Paris - 64 Rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge.
- Lala Razafintsalama (Birao sy mpanabe)
- Hanta Alfred Jonah (Birao sy mpanabe)
- Noro Rakotondrazanany (Birao sy mpanabe)
- Bodo Andriamialy (birao)
- Prisca Ratovoherizo (Mpanabe)
- Tatiana Rajosvah (Mpanabe)
- Hugues Rakotondrazanany (Mpanabe)
- Fanny Ranaivoharindriaka (Mpanabe)
- Niaina Razafinarivo (Mpampianatra hira)
- Jérémie Ratovoherizo (Mpampianatra hira)